I-Chic & Ezothando ku-Yemenite Quarter
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Yossi & Ana
Isendaweni emaphakathi esifundeni sase-Yemenite saseTel Aviv, leli fulethi elinefenisha ephelele linikeza umklamo oyingqayizivele nowesimanje kanye nomoya waseMedithera.
Izindonga zezitini eziveziwe kanye nempahla yesitayela sakudala ifaka kulo lonke leli fulethi elikhanyayo.
Ipulani elivulekile lokuhlala/ikhishi lifaka usofa kanye nezinto zokupheka. I-mezzanine ethokomele (usilingi esitezi se-mezzanine ukuphakama okungu-180 cm) ibamba umbhede ophindwe kabili onethezekile kanye ne-TV yesikrini esiyisicaba esifakwe odongeni. Igumbi lokugezela elivulekile lineshawa lokungena.
4.94 ·300 okushiwo abanye
4.94 · 300 okushiwo abanye
I-Kerem HaTeimanim iyindawo ehlukile futhi efiselekayo, njengedolobhana enkabeni yedolobha. Lena indawo ofuna ukuhlala kuyo - iphakathi nendawo yomlando yase-Tel Aviv, futhi indawo enhle inezindawo zokuphuzela utshwala, amathilomu nezindawo zokudlela ezanele ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho nezifiso zakho. Futhi kuseduze cishe nayo yonke into ethokozisayo e-Tel Aviv:
Amabhishi amahle anesihlabathi akuhambo lwemizuzu emi-3, njengoba kunjalo neCarmel Market.
Ukuhamba imizuzu eyi-10 ukusuka eRothschild Boulevard yomlando enenhlanganisela yezakhiwo ezintsha nezindala kanye nenala yezindawo zokudlela namakhefi.
Ibungazwe ngu-Yossi & Ana
Kuso sonke isikhathi sokuhlala izivakashi zijabulela ukuba khona kwethu unomphela ngenxa yeqiniso elilula lokuthi sihlala esakhiweni esisodwa.
Silapha ukuze sinikeze impendulo kuzo zonke izicelo, kungakhathaliseki ukuthi ukuthola isivakashi sifike ebusuku, uku-oda endaweni yokudlela, uku-oda itekisi, izincomo ezenzakalweni, imibukiso noma amakhonsathi.
Uma izivakashi zibonisa isithakazelo, sihlala sijabule ngokuba nohambo lwasekuseni futhi sitshele umlando okhethekile wendawo.
Silapha ukuze sinikeze impendulo…
UYossi & Ana Ungumbungazi ovelele